Archive du 20170915
Fampihavanam-pirenena Miala any sahady ny resa-bola
Vao niandoha dia efa niteraka adihevitra maro ny fomba nananganana ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy na ny CFM.
Komitin’ny fampihavanam-pirenena Tsy misy anay io, hoy i Tabera Randriamanantsoa
Olona tena manam-piniavana hampihavana tokoa ireo mpikambana ao amin’ny komitin’ny fampihavanam-pirenena na ny CFM izay nahavita fianianana ny alarobia teo, hoy ny filohan’ny Antoko Kintana, Tabera Randriamanantsoa.
Marc Ravalomanana Namondrona ireo mpomba azy tao Mahajanga
Tsy diso anjara tamin'ny fankalazana ny faha-15 taona niorenan’ny antoko Tiako I Madagasikara ireo mpikatroka tao Mahajanga.
Demokrasia Nanimba an’i Madagasikara
Hankalazaina anio zoma 15 septambra ny andro iraisam-pirenena momba ny demokrasia. Teny anisan’ny malaza indrindra manerantany, saingy toa samy manana ny fandraisany sy ny fandikany azy ny isam-pirenena sy ny isam-batan’olona.
Fanitsiana lalàmpanorenana Tsy ilaina sady mampidi-doza
Tsy isalasalana fa tena misy tsininy ilay lalàmpanorenan’ny Repoblika IV° nanan-kery ny 11 desambra 2010 ary nampiharina nanomboka tamin’ny 25 janoary 2014,
Vidin’ny henan’omby Hidina ato ho ato
Taorian’ny fifanatonana sy fifampiresahana teo anivon’ny koperativa Mada Omby sy ireo tompon’andraiki-panjakana dia nilamina ihany hatreto ny famatsian’omby ho an’Antananarivo, hoy ny filohan’ny koperativa, Tahiry Sambehafa.
Firehetan’ ny valanjavaboarin’Isalo Misy ambadika hafahafa
Nirehitra nanomboka ny talata 12 septambra teo ny valanjavaboarin’Isalo, ary omaly alakamisy 14 septambra vao voafehy tanteraka ny afo.
Filoha Rajaonarimampianina « Tsy mivarotra tany amin’ny vahiny izahay »
Sesilany ny kiana mahazo ny fitondrana Rajaonarimampianina amin’ny resaka fivarotana tanindrazana amin’ny vahiny.
Halatra taribin’ny Jirama Tafakatra 19 900 m sahady tamin’ity taona ity
Mihamahazo vahana hatrany ny halatra taribin’ny orinasa JIRAMA tanterahin’ireo olon-dratsy eto amintsika. Tafakatra 19.900 metatra sahady tamin’ity taona ity, hoy Ralaivao Eloi, tale teknika izay mitentina 154 tapitrisa Ar.
Fifaninanana tanàna madio Lasan’Atsimomparihy ny amboara
Lasan’ny fokontanin’Atsimomparihy ao anatin’ny distrikan’Ambohidratrimo ny amboara tamin’ilay fifaninanana tanàna madio nokarakarain’ny kaominina Ambohidratrimo sy ny orinasa Vivo Energy.
Tsipy kanetibe – Malagasy tompondakan’i Afrika Noraisina tamim-boninahitra
Tafaverina soa aman-tsara an-tanindrazana omaly alakamisy 14 septambra ny delegasiona Malagasy amin’ny taranja tsipy kanetibe izay nibata ny anaram-boninahitra tompondakan’i Afrika 2017 eo amin’ity taranja ity.
Baolina kitra -Telma Coupe de Madagascar Ireo lalao 1/8-ndalana ho tanterahina amin’ny 24 septambra
Navoakan’ny FMF ihany koa ireo lalao 1/8-ndalana amin’ny Telma Coupe de Madagascar 2017 ho tanterahina ny faha-24 septambra ho avy izao mialohan’ny Thb Champion’s League Malagasy.
Miandry fahafatesana !
Tsy milamina intsony ny tany ary mbola hihamahery vaika izany atsy ho atsy. Tsy mandondom-baravarana intsony ny fahantrana fa efa ao an-tsoso-koditra ho an-dRamalagasy.
Mpitatitra eto an-drenivohitra Hitokona amin’ny talata
Tsy misy ataon’ireo mpitatitra afa tsy ny mampijaly ireo mpandeha aloha hatreto,
Fahasimban’ny sosona ôzôna Mety hahazoana homamiadan’ny hoditra
Mihasimba tsikelikely ny sosona ôzôna eto amintsika noho ny antony maro samihafa. Hankalazaina rahampitso sabotsy 16 septambra ny andro iraisam-pirenena amin’ny fiarovana izany sy ny faha-30 taonan’ny “protocole de Montréal”
Betafo Antsirabe Mbola tsy milamina ny famatsian-drano fisotro
Mbola tsy milamina fa voa mainka mikorontana tanteraka ny fitantanana ny famatsian-drano fisotro madio ao amin’ny kaominina ambonivohitr’i Betafo Antsirabe
Fizarana « contrat » Mpampianatra Be ireo voatery nitrosa niakarana aty Antananarivo
Hotanterahina etsy amin’ny Lapan’ny kolontsaina sy fanatanjahantena Mahamasina anio, ny lanonam-panjakana hizarana ireo fifanarahana arak’asa (contrat de travail) an’ireo mpampianatra FRAM horaisina ho mpiasam-panjakana. Andiany fahefatra ity, ary ny avy amin’ny Faritra 22 no nakarina eto an-drenivohitra.
Asan-dahalo any Betroka Manolotra vahaolana i D’Gary
Nandalo tany amin’ny distrikan’i Betroka nandritra ny 15 andro ny tenako, hoy Randrianasolo Ernest D’Gary mpanakanto fanta-daza manerantany amin’ny fitendrana gitara, ka nahita marina sy nanadihady ny zava-misy tany an-toerana.
ACMIL Antsirabe Zazavao 180 nahazo fiofanana fototra
Vata-miaramila hanao fanompoam-pirenena niisa 180 no natao ambany faneva tao amin’ny akademia Miaramila Antsirabe omaly alakamisy,
Fiara taksibrosy marika Sprinter mampifandray an’i Mampikony-Fandriana no tra-doza tao Mahandraza, 20 km tsy hidirana an’Antsirabe omaly tokony ho tamin’ny 6 ora maraina.